Kenya ma waxay qarka u saaran tahay qalalaasa Dastuur? - BBC News Somali
Image caption Garsoorayaasha maxkamada ugu sareysa ee Kenya
Eedeynta ay maxkamada ugu sareysa ee Kenya ay u soo jeedisay gudiga doorashada iyo gudoomiyahooda in ay ku fashilmeen doorashada, ayaa waxa uu ahaa guddoon dalka u horseedi kara qalalaaso dastuuri ah.
Go'aankii lagu laalay dib u soo doorashadii madaxwayne Kenyatta ayaa ahayd mid lama filaan ah in qaarada Africa ay ka dhacdo, waxaana soo dhaweeyay dad badan.
Waxaa gudoonka ay dad badan u arkayeen in ay ahayd mid kala saartay awoodaha kala duwan ee dowlada, waxayna muujisay madaxbanaanida waaxda garsoorka.
Balse su'aasha taagan ayaa ah in doorashada ku celiska ah ay suuragal ma tahay in lagu qabto waqtigii loogu talagalay ee 60 maalmood gudahood?
Kenya: “Waddo kale nooma furnayn in aan doorashada laalno mooyee”
Maxaa lagu eedeeyay Guddiga doorashada ee Kenya?
Image caption Dibad baxayayaal
Iyada oo lagu wado in doorashada ku celiska ah la qabto dabayaaqada bisha October, ayaa waxa la is weydiinayaa sida guddiga doorashada ee hadda jira loogu aamini karo in ay qabtaan doorasho kale.
Hadaba maxaa xiga oo dhici kara?
Madaxweynaha hadda talada haya ayaa sheegay in doorashada ku celiska ah lagu qabto xilligii loogu talagalay.
Wuxuu hadalkaasi sheegay ka hor inta maxkamdda aysan soo saarin xukunka oo faahfaahsan ee ay ku laashay natiijada doorashadii August.
Hadda waxa shaki la gelinayaa in xilliga loo qabtay doorashada lagu qaban karo, maadaama khilaafyo kala duwan ay jiraan.
Image caption Uhuru waxa uu doonayaa in doorashada ay qabtaan guddiga hadda jira
Dastuurka Kenya ayaa dhigayo in 60-da maalmood gudahood lagu qabto doorashada haddii maxkamadda ay amarto in lagu noqdo.
Hadda waxaa loo baahan yahay in la qabto ugu dambeyn 31-da October, balse faafaahin badan looma hayo waxa dhici karo haddii la qaban waayo doorashada.
Sharci yaqaanada Kenya ayaa ku kala aragti duwan waxa dhici kara haddii aan doorasho la qaba.
Cabdiqaadir Xuseen Maxamed (Cabdiqaadir Looyar) waa la taliyaha madaxwaynaha Kenya ee dhanka sharciga wuxuuna sheegay in ay sahlan tahay jawaabta waxa dhici kara haddii aan doorasha la qaban.
Cabdiqaadir oo sidoo kale ah sharci yaqaan dhanka dastuurka ah ayaa sheegay in haddii doorasho la qaban waayo uusan jirin wax qalalaaso dastuur ah oo Kenya ka dhacaya.
"Haddii ay dhacdo in aan doorasho la qaban, dowladda way dhisan tahay, madaxwaynaha jagada wuu hayaa ma wareejinayo ilaa madaxwayne cusub laga soo doorto oo la dhaariyo saas ayay u wareegtaa awoodda," ayuu yiri Mr Cabdiqadir.
Sharci yaqaanka ayaa qabo in nidaamka dowliga ah ee dalka uu dhisan yahay aysan jirin sabab loo walaaco.
"Baarlamaanka labada aqal ba way dhisan yihiin, maxakamadaha waakan way shaqaynayaan, dowladaha degaanada way dhisan yihiin, dowladana way dhisan tahay, hadiiba ay dhacdo in 60 maalmood laga gudbo ma jirto wax qalalaaso dastuur oo dhacaya," ayuu hadalkiisa ku daray Cabduqadir Looyar.
Dhanka kale mucaaradka dalka Kenya ee NASA ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa ku baaqaya in la kala diro gudiga doorashada.
Mucaaradka waxa ay sheegeen in aysan doorashada ku celiska ah ka qayb gali doonin haddii ay qabanayaan xubnaha guddiga IEBC hadda hogaaminaya.
Hogaamiyayaasha mucaaradka NASA ayaa waxa ay soo bandhigeen shuruudo badan ka hor inta aan la qaban doorashada ku celiska ah.
Cabdiqaadir Xuseen Maxamed wuxuu sheegay in sharciga Kenya uu qabo in hal musharax uu u tartami karo doorashada.
Wuxuu intaa ku daray in taageerayaasha mucaartadka hadaysan codeyn aysan saameyn karin tirada cayiman ee codeysa.
"Dalkani Kenya qasab ma aha in qofka uu codkiisa dhiibto," ayuu yiri mr Cabdiqaadir.
Sharci yaqaanka oo la hadlayay BBC ayaa sheegay in haddii boqolkiiba 60 ka mid codbixiyayaasha ay codkooda dhiibtaan ay doorashada ansax tahay.
"Waxaa dhici karto in boqolkiiba 50 ay codeeyaan ama boqolkiiba 60, marka hadii boqolkiiba 60 ay codeeyaan waxay ku tusaysaa boqolkiiba 40 in aysan codayn, marka haddii mucaaradka ay ka fariistaan doorashada oo boqolkiiba 40 ama 30 ay codayn waayaan sharciyan wax qalad ah uma keenayso natiijada", ayuu yiri mr Cabdiqaadir.
Laakiin macadda tirada taageerayaasha rasmiga ah ee xisbiga talada haya ee Jubilee in ay gaareyso boqolkiiba 60.
Mucaaradka waxay sheeganayaan in ay taageerayaashoodu yihiin kuwa ugu badan ee Kenya.
Madaxwaynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isaga dhankiisa sheegay in haddi aan doorashada ku celiska ah la qaban uu xilka sii hayn doono.
Mucaaradka ayaa ku doodaya in haddii 60 maalmood ee loo asteeyay doorashada ay ku dhici wayso uusan madaxwaynaha sharciyan sii hayn Karin xilka.
Image caption Hogaamiyayaasha Mucaaradka Kenya
Eedeynta Guddiga doorashada
Gudoomiyaha guddiga doorashada ayaa si toos ah loogu canbaareeyay in uu ku dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu ku guulaystay doorashada madaxwaynanimada iyada oo aan natiijada la xaqiijin.
Mucaaradka ayaa ku doodaya in uusan sii hayn Karin xilka ,balse geedi socodka lagu badalayo ayaa qaadan kara waqti dheer oo adag.
Sharaxaada ay ka bixisay go'aankeeda maxkamada ugu sareysa ayaa muujinaya in geedi socodka doorashada uu qaladaad badan ku jiray.